Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. दुनियाँमा कुन देशसँग कति छन् परमाणु बम ? – Emountain TV
दुनियाँमा कुन देशसँग कति छन् परमाणु बम ?
एजेन्सी, १० असार । इरान र अमेरिकाबीचको तनावले मथ्थर हुने संकेत गरिरहेको छैन । अमेरिकी ड्रोन इरानले खसालेको पछिल्लो घटनापछि दुनियाँका शक्ति राष्ट्रहरु ध्रुवीकृत हुने लक्षण देखा परेको छ । अमेरिका र रुस पनि फेरि एकपटक आमने सामने देखिन थालेका छन् ।
दुवै परमाणु हतियार सम्पन्न देश हुनुका कारण यो अवस्था चिन्ताजनक हो । अर्कोतर्फ हतियार दौडमा रहेका केही देशले आफ्नो प्रतिरक्षा बजेटको खर्च बढाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यदि दुनियाँमा परमाणु युद्ध सुरु भयो भने के होला ? सायद मानव सभ्यताको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने जोखिम छ ।
आखिर दुनियाँमा कुन देशसँग कति परमाणु बम छन् त ? स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्यूटको एक रिपोर्टले यो तथ्य बाहिर ल्याएको छ । परमाणु हतियारको संख्यामा पछिल्लो समयमा कमी आएको भएपनि दुनियाँका ९ वटा देशहरुसँग अहिले पनि परमाणु बम रहेका छन् । यी देशमा अमेरिका, रुस, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तर कोरिया रहेका छन् ।
यी मध्ये कुन देशसँग कति परमाणु बम छन् ?
अमेरिका : ६१८५
फ्रान्स : ३००
चीन : २९०
बेलायत : २००
भारत : १३०–१४०
इजरायल : ८०–९०
उत्तर कोरिया : २०–३०
रिपोर्ट अनुसार विश्वमा परमाणु हतियारको कूल उत्पादन कम भएतापनि दक्षिण एसियामा भने बढिरहेको छ । सन् २०१९ को सुरुवातमा विश्वमा परमाणु हतियारको कूल संख्या १३ हजार ८६५ थियो । त्यसमा तैनाथ गरिएका र विघठन गरिएका सबै हतियार गण्ना गरिएको छ ।
घरको काम गर्न श्रीमानलाई कचकच गरिरहने श्रीमती पक्राउ
यस्तो रुख जहाँ ४० खालका फल फल्दछन्
जहाँ राजाका अगाडि अर्धनग्न भएर नाच्छन् युवतीहरु
एक नर्सबाट ८५ बिरामीको हत्या, यसरी खुल्यो अपराध
‘पुरुष’को अनुहारवाला पर्स भयो भाइरल
स्कर्ट लगाएर अफिस आउने महिला कर्मचारीलाई बोनस दिइने
एक सय वर्षकी आमाले ८२ वर्षको छोरालाई स्याहार्दै